Xog Deg Deg ah oo hada naga soo gaartay Xafiiska RW kheyre iyadoo Wasiiro & Xildhibaano loo diyaariyay Mooshinka… | Badweyn.com
Xog Deg Deg ah oo hada naga soo gaartay Xafiiska RW kheyre iyadoo Wasiiro & Xildhibaano loo diyaariyay Mooshinka…
illo wareed ka tirsan xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya ayaa Goordhaw nala wadaagay Xogta kulamo xasaasi ah oo xalay ilaa saaka ka socda Xafiiska R/wasaaaha waxaana kulamadaasi goobjoog ka ahaa xildhibaano badan iyo wasiiro xukuumada ka tirsan.
Xogta ayaa sheegeysa in kulamadaasi looga hadlay qaabka maanta loo wajahayo Mooshinka ka dhanka ah Xukuumada waxaana la sameeyay koox isku xeran xildhibaano ah oo difaac adag u noqda R/wasaare kheyre iyo Wasiirada.
Xogta ayaa sheegeysa in Xildhibaanada horboodaya kacdoonka lagu difaacayo Xukuumada loo balanqaaday Lacag iyo Xilal waxaana siyaasada saaka ay tahay mid kacsan.
Dhanka kale xildhibaanada Mooshinka ka diyaariyay Xukuumada oo qiil ka dhigtay kiiska Qalbi Dhagax ayaa lasoo sheegayaa qaarkood in loo hanjabay balse ay ku adkeysteyn in aysan mowqifkooda badali doonin.
Lasoco Wararka ku saabsan Mooshinka oo Maanta Xasaasi ah: